Ukuhlaziya ngokufanelekileyo abantu abajikelezile
Umhlobo uyayibamba izikhonkwane zakhe, umyeni wakhe ufunda iphephandaba ekudleni, kwaye unyana ulahle izinto? Ewe, indlela eyiyo yokufunda kwakhona abantu abajikelezile?
Yintoni enokuyenza, ukuba umkhwa omnye womntu ungonakalisa imvakalelo yakho kwaye ikuvimbele ukuba uphile? Ngaba zikhona iindlela zokumnceda kumntu, ngakumbi umntu omdala? Kakade kukho!
Kwakhona, konke akunjalo!
Kodwa okokuqala zama ukuqonda ukuba yintoni umkhwa ombi womntu, kwaye ungayithandi yedwa, kuba ayenzi ngendlela oye wayisebenzisa ngayo. Umzekelo, usoloko uhamba ekhaya kwikhaya elifanelekileyo, kwaye udade wakho ukhetha ingubo. Ucinga ukuba iitilesi kwindawo yokuhlambela kufuneka zixhomeke kwiikhonkco, kwaye unyana uhlala eshiya umshini wokuhlamba. Ukuze uqale ukufundiswa ngokutsha kwabantu abakujikelezileyo, shwa nkathela zonke iingxaki kunye neengxaki zokuqhubela phambili kwimfundo.
Kulula kakhulu kuwe xa ipenki neepensisi zihleli ngendlela ethile, kwaye umtshintshi akabenzi njalo ...
Kubonakala kukho konke oku zinto, kodwa ziyakhathaza kakhulu. Kwaye ngamanye amaxesha ingcinga ehlambalazayo ifika engqondweni: abantu abajikelezileyo bayenza ngokukhawuleza. Enyanisweni, akukho mntu ufuna into embi, abanye nje benze yonke into yabo. Yaye ukuba uyayiqonda le nto, kungenzeka ukuba ingxaki iza kutshabalala ngokwayo.
Xa abantu behlala okanye basebenze ecaleni, bafanele bakwazi ukulungelelanisa, banikeze imizwa kunye nezilingo zomnye nomnye. Kwaye oku kufuneka ukwazi oko abantu abangathandi. Indlela efanelekileyo yokujongana nomkhwa omnye womntu kukuxelela umnini indlela ozivelayo ngayo kule nto okanye elo nyathelo. Kodwa ungathethi ngokuziphatha kwakhe "okungalunganga". Isiphetho kufuneka senziwe ngumntu ngokwakhe. Ukuba uyintanda kuye, uya kukunyamekela ukuba anganikeli iimvakalelo ezimbi. Ngaba ufuna ukulungisa ngokutsha abantu abajikelezile kunye nokubeka indlela yezihlobo ezithembekileyo? Yenza oku kanye!
Ukuba bobabini banomdla wokuzihlaziya, unokwazi ukubonisa imikhwa emibi ngamahlaya. Umyeni akafundi ukuhlanza iisokisi kwinqwelo yokuhlamba impahla? Hayi, mbeke kwisitulo abathandayo aze aqonde ukuba bafanele kuphi. Ngokuqinisekileyo nawe unemikhwa evuthayo abanye. Vumelana nokulwa nabo ngomgaqo: wena kum - mna kuwe. Khetha umkhwa omnye kwaye uthembisane ukuba uza kwenza okusemandleni akho ukuwuqeda. Qiniseka ukuba usethe ixesha olungele ukujongana nayo. Yonke imini isabelo sabelo. Kwaye ngozuko lwenkoyisa, lungisa iholide!
Kodwa yintoni enokuyenza, ukuba abanye bayaphikelela baze balahle imikhwa yakho ecasulayo ayifuni nhlobo? Oko kukuthi, ngamazwi, ubonakala evumelana nawe, kodwa isabelo ... Yenza oko: zama ukulungisa ngokutsha abantu abajikelezile.
Zama ukuqonda: mhlawumbi akakwazi ukuziphatha ngokwakhe, kuba ngale ndlela uzama ukwazisa abanye ngeengxaki zakhe, ukuthetha ngokungasombululi ngaso.
Izinto ezichangekileyo zingabonisa ukuba umntu ufuna ukukhumbuza ngokwakhe kwaye athathe inxalenye "yonyameko" kunye nokuthandwa kwintsapho. Ngokuqhelekileyo le ndlela isetyenziswe ngabantwana, ukuphonsa amathoyizi egumbini lokuhlala, njengokungathi uzama ukuthi: "Mama, ncokola nam!"
Ukuqhubeka ngokuqhubekayo "ngendlela yabo," ngamanye amaxesha abantu bakhumbuza ilungelo labo kwindawo yabo (ngokomzimba nangokwengqondo). Cinga ngako, awuyikunyanzelisa kakhulu izihlobo zakho? Ngaba kukho indawo ebomini babo ngenxa yokuzilibazisa, iintlanganiso kunye nabahlobo?
Intombi ihlala ihluleka ukuzalisekisa izithembiso zabo? Cinga, mhlawumbi akakwazi ukuthi "hayi" ekuphenduleni izicelo zakho? Thetha naye.
Kukho imilinganiselo embi - ukuguqula iminwe, ukuguqula into ezandleni zakho, ukulungelelanisa iinwele zakho okanye ukukhanda ikhanda lakho, elivuyisa okanye lithetha nge-neurosis ebangelwa uxinzelelo.
Ukuziqhelisa, kuyafaneleka ukunyamekela izinto ezimbini. Okokuqala, ukunceda umntu azive ethembele ngakumbi. Ukuze wenze oku, musa ukumgxeka, kodwa, ngokuchaseneyo, ngokuphindaphindiweyo ukunyamezela, udumise.
Okwesibini, zama kunye ukuthatha indawo yesenzo "esingalunganga" into engathandekiyo okanye eyincedo. Kungcono ukucoca indlu okanye, ubuncinci, udwebe kwincwadi yeedemon, kunokuba utyumle ukhonkwane okanye ukhonkwane izipikili.
Iingcali zengqondo zikholelwa ukuba abo bavakala kakhulu ngabo bajikelezileyo zizo iimpawu kunye nemikhwa abangenako ukuzifumana. Kwaye ukuba awukwazi ukuqeqesha umyeni wakho okanye abantwana ukuba balawule , zama wena ukuba ungabi yi-geek enomdla, ubuncinane ngeveki! Nangona ungafuni ukuhlala ngaloo ndlela ngonaphakade, uya kuziva yonke into evuyisayo yile ndlela ebomini.
Iimfihlelo ze-shopaholic: yonke inyaniso malunga nezaphulelo
Abantu baziva njani xa umfazi ebiza kuqala
Indlela yokuphepha iingxabano kwintsapho kunye nabahlobo
Imiba yengxaki yenkalo yesifazana, enzima kunzima ukuyilungisa
Izindlela zokuvavanya umzimba
Iimpawu zomzimba zemvelo ezenziwe ngobusi
Indlela yokunciphisa umzimba ngokufanelekileyo
Aubergine pâté kunye negalikhi
Isaladi e-Crispy eneepineyini
Indlela yokuhlamba iki ngee jeans
Ukutshabalalisa nokukhwehlela igazi kumntwana
Yonke into malunga ne-mascara
Yintoni ukupheka kwiiNtshontsho Zonyaka Zonyaka (iigusha) 2015, iindlela zokupheka ezintsha kunye neefoto
Ukupheka kwezitya zeHalloween - imenyu elula kunye neyoyikisayo, eneemifanekiso. Yintoni yokupheka iHalloween kubantwana
Iipropati ezifanelekileyo zonkrimu omuncu, ukubunjwa
Yintoni enokuyenza ngokukhawula kwekhaksi?
Indlela yokuvuselela ubuso bakho ebusika
Ikhekhe elingalibalekiyo "Isiqithi sokuzonwabisa"